Filtrer les éléments par date : samedi, 14 décembre 2019
samedi, 14 décembre 2019 15:20
Marolambo: Nilanja sorabaventy nitaky ny tambinkaramany ireo mpampianatra ENF
Nanao hetsika nilanja sorabaventy, naneho ny alahelony sy nitaraina teny amin’ny CISCO, omaly, ireo mpampianatra ENF manerana ny fari-piadidiam-pampianarana Marolambo, noho ny tsy mbola nandraisan’izy ireo ny tambikarama efa 10 volana ho an’ireo mampianatra amin’ny EPP, ary efa 24 volana ny an’ireo amin’ny « Préscolaire ».
Manao antso avo izy ireo mba hijerena akaiky ka hamahana haingana ny olan'izy ireo, satria « ny tsy tsinay tsy mba vatsy, ary ny kibo tsy mba lamosina » ; hifarana rahateo ity ny taona, mba te hanao fety toy ny fianakaviana malagasy rehetra izy ireo.
samedi, 14 décembre 2019 14:44
Tontosa ny zoma 13 desambra 2019 ny famindram-pintantanana teo amin’ny Tale Jeneraly ny Tahirimbolam-panjakana teo aloha, Andriamanga Herivelo sy ny Tale Jeneraly vaovao, Ranjalahy Ihajambolatiana.
Nandritra io fotoana io no nankasitrahan'ny Minisitry ny Toe-karena sy Fitantanam-bola Randriamandrato Richard ny Tale Jeneraly teo aloha tamin'ireo asa sy andraikitra nosahaniny izay nahitam-bokatra tokoa. Nirary soa ny Tale Jeneraly vaovao ihany koa izy mba hahavita be amin'izao andraikitra lehibe izay sahaniny izao
Inspecteur du Trésor, manam-pahaizana manokana mahakasika ny « Microfinance » i Ranjalahy Ihajambolatiana, Tale Jeneraly vaovao. Talen’ny Kabinetra ny Minisitry ny Toe-karena sy Fitantanam-bola izy talohan’izao fanendrena azy izao.
samedi, 14 décembre 2019 14:41
Ivato: Natomboka ny fananganana « building mora »
Notontosaina teny Ivato, Distrika Ambohidratrimo ny zoma 13 desambra 2019 ny fametrahana vatofotry ny asa fanorenana « building mora » na trano ahitana rihana efatra miisa 38. Nitarika ny lanonana teny an-toerana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Tanim-panjakana mirefy 14ha no hanorenana ireo fotodrafitrasa ireo ary haharitra iray taona sy tapany ny asa. Volan'ny fanjakana malagasy madiodio no hanatanterahana ireto tetikasa ireto, ary orinasa malagasy ihany koa no hampiandraiketina izany.
Natokana ho an’ireo olona manana fidiram-bola antonony na “classe moyenne” ireto andiana trano ireto, ka hisitraka izany na ny mpiasam-panjakana na ireo mpiasa avy amin’ny sehatra tsy miankina.
Ny talata 10 desambra 2019 Rajohnson Olivier Hugues Rija no tonga tao amin’ny Lapan’i Elysée, nanolotra ny taratasy fanendrena azy ho Masoivohon’i Madagasikara miasa sy monina eo anivon’ny Repoblika Frantsay, tamin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron.
Nandritra ny filankevitry ny minisitra tamin’ny 18 septambra 2019 no nandraisana ny didim-panjakana fanendrena an-dRajohnson Olivier Hugues Rija.
Rajaonarivony Narisoa, izay efa nodimandry, no ambasadaoro malagasy farany voatendry niasa tany Frantsa.
samedi, 14 décembre 2019 12:20
Artista zokiolona: Nandray vola fisotroan-dronono telo volana faha-4
Nanomboka ny 13 desambra teny amin’ny foiben’ny OMDA (Office Malagasy du Droit d'Auteur) Faravohitra-Antananarivo, ny fandraisan'ireo artista zokiolona ny fisotroan-dronono telo volana faha-4.
Miisa 151 eo izy ireo ankehitriny.
samedi, 14 décembre 2019 12:13
Bakalorea 2019: Nankasitrahana ireo mpianatra sangany manerana ny faritra 22
Notolorana taratasy fanamarihana fahamendrehana ireo mpianatra sangany tamin’ny fanadinana bakalorea 2019 manerana ny Faritra 22 eto Madagasikara.
Noraisina teny amin’ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa eny Fiadanana ireto mpianatra ireto. Nampirisika an’ireto tanora ireo ny Minisitra ny hitazonana izay haitsara ananan’izy ireo izay hatrany amin’ny tanjona tiany hotratrarina.
samedi, 14 décembre 2019 12:05
Hatrefindrazana Jerry: « Malalaka ny mponin’i Faradofay na hisafidy ny handroso,na ho naman’izay tratra aoriana »
Nanambara ny governoran’ny Faritra Anosy Hatrefindrazana Jerry momba ny fampidirana teknolojia vaovao amin’ny alalan’ny « fibre optique » iarahan’ny orinasa TELMA sy ny tetikasa METISS, « malalaka ny safidy ho an’ny mponina eto Faradofay,na hisafidy ny handroso,na ho naman’izay tratra aoriana ».
Etsy ankilan'izany dia misy ampahan’ny mponina eto Tolagnaro manohitra ny fanimbana sy ny « massif corallien » sy ny torapasik’i Libanona amin’ny fametahana an’ity « fibre optique » ity.
samedi, 14 décembre 2019 12:02
Trafika « heroïne »: Tanzaniana iray voaheloka enin-taona asa an-terivozona
Nivoaka omaly ny didy mikasika ity trafika « heroïne » ka nanamelohan’ny Fitsarana ilay Tanzaniana mpanao azy enin-taona asa an-terivozona, miampy onitra 1.5 miliara Ariary. Zavamahadomelina mahery vaika milanja 6kg no saika hoentiny hivoaka an’i Madagasikara, saingy sarona nandritra ny fitsirihana tamin’ny « scanner » ny valizy nentiny nanafenany io « heroïne » io.
samedi, 14 décembre 2019 12:00
Haino amanjery: Mitaraina ho lasibatry ny « brouillage » ny MBS TV
Nanao fanadihadiana ny teknisian’ny MBS TV rehefa naharay fitarainana maro avy amin’ny mpijery fa misy manindry ny MBS TV. Voamarika hoy ny fanambarana nataon’ity orinasan-serasera an’ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana fa « misy manao "brouillage" ny "canal MBS TV" ».
« Miendrika "sabotage" raha ny tombana. Efa mandray ny fepetra ny tompon'andraikitra rehetra », hoy ny fanambarana.